Cunto: Sidee Shaqooyinka WordPress u Shaqeeyaa
Abuuritaanka WordPress plugin ee adiga keligaa ma aha mid aad u adag, waxayna xallili kartaa dhibaatooyinka kala duwan ee goobtaada. Copying, editing iyo dhajinta codka kuma filna sida aad u fahmi lahayd sida plugos WordPress u shaqeeyaan iyo sida loo casriyeeyo faylka functions.php - dicker satin stoff. Fidinta waa hab nabadgelyo leh si aad u habeysiiso goobtaada.
Jason Adler, khabiir sare oo ka socda Semt , wuxuu xaqiijinayaa in ay aad u sahlan tahay in aad ku bilowdo pluginnada WordPress, waadna ogaan kartaa sida ay u shaqeeyaan. Plugins Wordpress waa qoraallada PHP ama qawaaniinta wax ka bedeli kara qaabeynta boggaaga, eegto iyo waqtiga guud ee rikoodhada. Waxay bixiyaan shaqeyn dhamaystiran oo ay la socdaan jeexjeexyada, taasina waa sababta ay fahamsan tahay sida shaqooyinka WordPress u shaqeeyaan ay muhiim u yihiin baqshiishe kasta iyo webmaster kasta. Sida mowduucyada loo baahan yahay si loogu daro shaqeysi iyo fiirin boggaaga, plugins WordPress wuxuu xoojiyaa waxqabadka bogaggaaga internetka
1. FTP-gaaga boggaaga
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad fahamto waa sida FTP ay u shaqeyso, tanina waxaa lagu sameyn karaa barnaamij gaar ah oo FTP, sida Coda. Haddii aanad wax ka ogeyn FTP, waxaan kuu soo jeedinaynaa in aad illowdid tallaabadan oo aad horey ugu sii socotid talaabada soo socota
2. Ku soo hagaaji fartaada WordPress ku xiran
Marka aad bogga internetka ka hesho FTP, talaabada xigta waa inaad ku dhex gashid faylka WordPress plugin. Faylkani wuxuu ku yaal qaybta / wp-content / plugins iyo waa sahlan tahay in la helo.
3. Abuuri faylasha cusub ee loogu talagalay plugin
Qodob kasta oo aad abuurto, waxaa muhiim ah in la abuuro fayl gaar ah. Tani waa sahlan tahay in la abuuro, oo kaliya waxaad u baahan tahay inaad tagto dashboardka WordPress oo waxaad ku qortaa magaca faylkaaga. Looma baahna in la geliyo dhoobo, bannaan, shuruudo ama ereyo kale oo la mid ah oo dhib ku ah inay ku fakaraan
4..Abuuri faylka aasaasiga ah ee PHP loogu talagalay plugin WordPress
Tallaabada xigta, waxaad yeelan doontaa inaad sameysid faylka koowaad, kaas oo ah inuu noqdo faylka PHP gudaha faylka WordPress plugin. Hubi inaad siisay magac si sax ah faylkan sida My-only-plugin.php. Marka aad magacowdo, ha iloobin inaad faylka feylayso oo keydiso goobaha ka hor inta aadan xirin daaqada.
5. Dejinta macluumaadka fiilada
Ugu dambeyntii iyo mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsani waa koobiyeynta iyo dhajinta macluumaadkaaga plugin faylka muhiimka ah. Waa inaad hubisaa inaad ku qortey xeerkan soo socda ee feylka oo aad ku keydisay goobaha.
Magaca Plugin: My Plugin My Only
Tilmaam: Waa farsamadii ugu dambaysay ee WordPress, waana ku faraxsanahay inaan abuuro
Qoray URI: https://www.abc.mywebsite.com
Koodhaani waa faallooyinka PHP, taas oo aan si toos ah u muuqan doonin qaybtaada WordPress 'admin admin. Si kastaba ha ahaatee, WordPress wuxuu isticmaalaa koodhkan iyo xogta muhiimka ah si aad u soo saarto magacaaga plugin iyo kaa caawinaya inaad ka faa'iidaysato plugins kale. Waa inaad si buuxda u fahamtaa macluumaadka oo aad xasuusnaato koodhka kor ku xusan haddii aad rabto inaad ogaato sida plugos WordPress u shaqeeyaan oo ay qabtaan howlahooda kala duwan maalin kasta.